Warmly Welcome: #Shisha နှင့် သင့်ကျန်းမာရေး
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကိုဆိုးဝါစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါသည်ဆိုတာ ကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါ Shisha smoking ကြတော့ကျွန်တော်တို့ culture လဲမဟုတ်တော့ သေချာမသိနိုင်ကြဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရင်က ထင်ခဲ့တာက Shisha က ဆေးလိပ်လောက်တော့ မဆိုးဝါးဘူးပဲထင်ခဲ့တာဗျ၊ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ Shisha ကိုစတင်ပြီး တားမြစ်နေကြပါပြီ။
2. Shisha က carbon monoxide ပါဝင်မှုနှုန်း cigarette ထက်ပိုများပါတယ်၊ Carbon monoxide တွေက သွေးနီဥနေရာတွေဝင်ယူပြီး ခန္ဓကိုယ်ထဲက အင်္ဂါရပ်တွေကို oxygen ရောက်ဖို့ခက်ခဲစေတဲ့အတွက် organ တွေပျက်စီးစေပါတယ်။
3. Shisha smoking မှာလဲ ကင်စာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကတ္တရာ (tar)၊ carbon monoxide(car exhaust) ၊ heavy metal များဖြစ်ကြတဲ့ cobalt, lead အစရှိတဲ့ အရာဝတ္ထု ပစ္စည်း ingredient တွေပါဝင်ပါတယ်။
6. Shisha smoking က ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းထက်ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အငွေ့တွေပိုဝင်ပါတယ် Shisha တစ် session ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀ -၈၀ မိနစ် ကြာနိုင်ပါတယ် အဲလောက်ကြာချိန်ကို ဆေးလိပ် သောက်မယ်ဆိုရဲ အလိပ် ၁၀၀ နှင့်အထက်သောက်တာနဲ့ ညီမျှနေပါတယ်။
8. Shisha smoking ကရေထဲကဖြတ်လာတဲ့ ပိုက်ကို အနံ့ အရသာ အမျိုးမျိုး ပန်းသီး ပူရှိန်း coffee စသည့် အရသာတွေ ကို tobacco နှင့်ပေါင်းစက် ထားပြီး ရူရှိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
11. သောက်သုံးတဲ့ pipe တွေကို share မိရင်လဲ တီဗီ၊ ရေရုံ၊ အသဲရောင်အသားဝါ၊ စတဲ့ လူအချင်းချင်း ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေ ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်ပါတယ်။
(from) #MyanmarGallery facebook စာမျက်နှာမှ